Kudzoka GWAYANA MUNA 2016! | LE PRÊCHEUR DU RETOUR DU ROI
Mwari mumwe chete, mumwe Earth, One People.
Bhaibheri rinotiudza kuti Mwari « ndiye » uye kuti iye akasika zvinhu zvose, nyika uye murume.
Maererano nekarenda muHebheru tingadai gore rino 2016, vanhu 5777fung gore pakasikwa vanhu naMwari.
Chii kubvuma anoenda kundorwa nesayenzi rekunyebera uchapupu kuburikidza achiritara nechokuenzanisa vanhu vanopfuura miriyoni makore.
Munhau yose, Bhaibheri akadzidziswa vanhu kuchengeta shinda iyi mubatanidzwa pakati paMwari navanhu.
Haiwa, munhu pane kumuka pedyo Mwari nokudzidzisa uku Yakatowedzera ringabviswa.
Pasinei dzidziso yeBhaibheri, dzisiri vakawanda yakabuda pamusoro munhoroondo yevanhu. Paiva zuva vanamati, mwedzi uye Spooky zvekufungidzira vanamwari. Varume kunyange paakasvika sezvo vanamwari muenzaniso vanaFarao.
Asi munhu wenyika ano akanga kunyange mberi ari nokutuka Mwari!Munhu anenge vakaramba musiki wayo kana kuipa murume anoita sokuti Mwari haako.
Saka Mwari haamo mupfungwa womunhu ano, murume akatanga kurota chokuva mwari.
France pasinei Clovis uye Joan pamusoro Arc, raramba kushatirwa Mwari munhoroondo yayo (the kwevaisava Mapurotesitenzi musi St. Bartholomew, muroyi yakadaro, kusungwa uye yaiuya pakati Templars uye Jeanne Arc nezvimwewo ..) uye France ave akazosunungurwa pakupedzisira Mwari mamiriro mumakore 1789 chimurenga.
The Republic ave achida kuti adzinge Mwari paupenyu France muna 1789 uye tinoona parinogona pakupedzisira inotungamirira.
makore 227 gare gare, France raparadzwa, nechisimba uye kudzinga pfuma yake izvi nechisimba rekunyebera runyararo vari kutambirwa sezvo chinokosha, achibatsirwa, nepokugara, zvokudya, akatarisira vakasununguka uye kunyange kamari pamwedzi nemitero yedu!
Asi French vanogona kurarama ‘muurombo « pasinei nokuti kazhinji kunorwadza basa uye mitoro yakawanda rinorema pamusoro shomanana mhuri bhajeti, » mu nenhamo « apo akarova kubasa.
In mudyandigere vari zvakanaka chokwadi uye akaipisisa munjodzi pashure upenyu refu kushanda kazhinji kurwadza kwazvo.
The French vanhu vari chiseko chenyika uye andotongerwa kusachengeteka uye kutambudzika kubatsira izvi Mauto vavatorwa nako vakamanikidzwa nehurumende kurarama pamwe chete.
mhenyu Wakaisa ichi ane mari uye ndicho French vanhu vanotsigira kuti kurwadziwa zvikuru « Mitero, mutero, mari uye mhosva nguva dzose kukosha, apo evanhu zvikomborero kudukupiswa zvokuti rechiFrench vanhu vane guru kuome kurapwa.
Mutungamiri François Hollande ane kunyange, dzinenge mubhuku rake Aimbova vahosi, Akatuka vanhu vake ndivanani: « The mukanwa ».
Aya kunonyadzisa, zvinonyadzisa, zvinonyadzisa uye kutuka chinoratidza chokwadi zvisinei, nokuti ichokwadi kuti French kupodza zvakanaka.
Mari mazino hanya uye dentures kazhinji prohibitive vanhu kurarama muurombo uye nenhamo, uye ivo chaizvoizvo kazhinji mukanwa venyama.
By pamusoro kurapwa izvi uye dentures vakasununguka zvose nechisimba izvi yokumwe!
Isu vaKristu vanonzwisisa kuti kusavapo Mwari muupenyu France akatifambisa iyi chezvinyorwa ezvinhu.
Uye kuti kunzwisisa, Mwari aida « nechisimba » izvi yokumwe vari kubva kuchitendero Lucifer « Islam. »
Sezvatinoona ose zuva tiri kurarama munguva yomugumo nguva uye achapera kudzoka kwaShe wedu uye Mambo Jesu Kristu.
Ndine tariro huru kuti kudzoka ichi mumwedzi September kana mwedzi October 2016
Asi tinofanira kuziva kuti ndiri zvakaipa kare uye handigoni siya kuti nguva ino Ndichiri zvakaipa.
Haiwa, tingafanira kumirira mashomanana emakore kudzoka kwaIshe.
Asi ndinovimba kwete nokuti marwadzo ari atanga (kuti hazvirambiki)uye ugotema guru ravarwi kubva 29 September 2008.
Tinozivawo kuti vacharamba achiipa kuwedzera kudzokera mukubwinya kwaJesu Kristu kubvira paakadzokera anofanira kuva ari kurwadziwa ekubereka.
Saka kurwadziwa mberi uye zvinogona chete achiipa zvakawanda!
Kana Jesu Kristu anodzoka gore rino 2016, isu achakurumidza kusunungurwa kubva marwadzo ose aya muupenyu. Naizvozvo zvinokosha kuti tirambe muchiwadzana Mwari kuburikidza nomunyengetero kukumbira kanganwiro zuva nezuva zvedu, zvatinokanganisa, zvatinokanganisa, mabasa edu akaipa uye pfungwa dzedu kuchena.
Tine muupenyu hwedu dzinoratidza tsika dzedu dzechiKristu nokubatsira vose vaya vanokumbira isu rubatsiro kusanganisira nechisimba izvi.
Asi tinofanirawo kudzivirira tsika dzedu, nhoroondo yedu, tsika dzedu uye nyika yedu France.
Cherechedza kuti ndinoti nokuda France chinoshanda kuti nyika yose iri Europe iri nechisimba sokunge mitauro yedu, nyaya dzedu uye nyika yedu zvakasiyana, kutenda kwedu kwechiKristu hakuzivani.
Ndinofanira kujekesa kuti kusava nesimba hurumende dzedu rinokurudzira vanhu vose vari Kubuda kuti haana kuuya chete kuvaSiria asi kubva munyika kutsvaka upenyu muEurope uye kunyanya muFrance nani.
Mazuva okupedzisira asati kudzoka kwaJesu Kristu uchava nemafungiro toughest tsanangudzo vanhu. Tinofanira kunyengetera zvakasimba kuti zvinhu zvose zviitwe gore rino, 2016.
Izvi mashizha zviduku nguva kuunza kumukuru nhamba rezvisikwa kuna Kristu kuburikidza nokubhabhatidzwa.
Zvinonzi zvakare zvichida kuti rubhabhatidzo dzaipiwa vanotama zvose kuti Mwari akavatuma muEurope. Saka usazeza zvekuti rubhabhatidzo vose vanokumbira rubatsiro rwenyu.
Funga kuti dai Mwari akanga achida, tinogona kuva panzvimbo dzose mhuri vanotama.
Ramba uchizvininipisa uye tichitenda Mwari nokuda rudo kunotisvitsa pasinei zvedu, zvedu zvikanganiso, zvatinokanganisa, mabasa edu akaipa uye pfungwa dzedu kuchena.
Haiwa, kana Jesu Kristu ari anononoka kuuya uye adzokera Papera, saka tinotofanira dambudziko guru 2017.
Izvi zvichava musarudzo muFrance uye mumwe hana yake vachaenda kuvhota kuti anoda kubhabhatidzwa wavanoda.
Zvinofanira zvisinei kuziva kuti Republic ari mumvuri pacharo uye uchangamire yaro chabviswa wayo mari.
The simba uye simba France munyika périclitent kuwedzera kubva General De Gaulle.
Kana hapana zvinoitwa kumisa zvachose uye kuderedza nechisimba, mumakore anouya achava French vashoma VaKristu Republic kana kuchiripo asi hachisisiri rokunyika uye Koranic kuchinja uku ichava nevanhu musarudzo.
Zviremera zvave vairambidzwa kutaura chokwadi kuvanhu. Saka hapana nhamba pamutemo kurarama pamusoro nhamba French vaMuslim asi munhu anogona kuona muguta rimwe nerimwe, munharaunda yose kuti Islamic munharaunda dziri kuwedzera kukosha muFrance uye Europe.
In Zvakajeka kukosha Nzanga idzi inoshamisa!
Rutsigiro musarudzo idzi okurerutsa mitemo yevanhu Islamic vaitamira zvichiitika kubva Kutenda, chiKristu uye Jesu Kristu.
Mutongi uye mhosva vanotama kuchaitawo kubva Kutenda, chiKristu uye Jesu Kristu.
Asi musakanganwa kuti rudo kunotanga pakuzvichengetedza uye mumwe tinofanira kuti varidzi.
Saka chero zvisarudzo zvedu akasarudza vakuru vose izvi Mauto vanotama, tinofanira kuva nechokwadi chokuti zvisarudzo vari kushandiswa ne rudo uye rudo rwechiKristu.
Panguva apo vanhu vanoramba Mwari, vachiti « kwevanhu » vane zvakawanda hanya zvichaitirwa vamwe vavo pachavo zvichaitika nokutapwa mweya yavo.
Naizvozvo angangodaro kuti mushure musarudzo, chero pasarudzo mashoko uye zvipikirwa, dzinotama Rwako kuramba kutsvaira muEurope uye kunyanya muFrance.
Chete zvinokonzera nguva dzose pave chete nemigumisiro, kuti Islamists vaiva East, vachaita izvozvo muEurope.
Mhirizhonga, hondo yevagari uye hondo yechitendero Naizvozvo zvirokwazvo enliven pakupopotedzana Pashure mushure French musarudzo. Kana kwete pamberi !!!
Munyika umo Papa pachake arashikirwa kutenda kuti kuziva zvitendero zvose sezvo vechokwadi uye sezvo nzira inoenda kuna Mwari, saka zvinonzwisisika kuti dzakawanda hama dzedu nehanzvadzi vaichengeta zvinoreva vechokwadi kutenda kuri kuwedzera kurambidzwa.
Kudziviswa Kuita Zvimwe Zvinhu zvakare zvichiva rusununguko rwedu.Nokukurumidza isu hamuzomboteereri vane rusununguko rokushora mabasa ose pamusoro kutenda kwedu kwechiKristu, pamusoro machechi edu uye pamusoro mhirizhonga nehama dzedu nehanzvadzi muFrance uye mamwe nyika.
Saka hama dzangu dzinodiwa nehanzvadzi, zvandanyora mabhuku maviri nezuva rokutanga nesuo musoro Blog zita. « The muparidzi Kudzoka Mambo » uye subtitled « Kubva rima anouya chiedza » bhuku iri pakutanga chikamu hunoratidza kuvapo kwaMwari uye rinotsanangura nei zvaakasika zvizhinji murume uye chii chichaitika vaya vakasarudza kutevera kuda kwaMwari. Chikamu chebhuku rino yechipiri ine vamwe nyaya yangu inokoshesa uye kuponesa zvichibvira kuvhara pamusoro Blog nezvandinoda.
bhuku yechipiri rokuti « France, Civilization uye Republic regedzeka »uye ane musoro wenyaya muchikamu ndiye « Muparidzi Kudzoka Mambo » akatsanangura rokutanga chikamu sei isu vakanyengedzwa uye vakanyengedza nyaya mutsetse fatidiquement kuwana pachedu pakupera kwenguva muuranda. Inotsanangurawo kuti France anogona kubuda Rut ichi, « mumwe kudzoka Mambo France, » kana kudzoka kwaJesu Kristu ngazviitwe mashomanana emakore. Chikamu chebhuku rino wechipiri rinewo vamwe nyaya yangu neniwo inokoshesa kuponesa zvichibvira kuvhara pamusoro Blog nezvandinoda.
Chero zvinoitika, kudzoka kwaShe wedu Jesu Kristu ndiye pazera yedu, chiri chokwadi Mhedziso! Uye hazvina kutambudzika mumvuri mubvunzo!
Asi Bhaibheri rinotiudza kuti apo Jesu Kristu achadzoka kutenda kwechokwadi kwakaita rinenge anyangarika Kwenyika.
Saka kunyange kana ndine chokwadi pedyo kwe vadzoka uye promptness kwaIshe wedu Jesu Kristu, nokuti mugore 2016, chokwadi chinoramba kuti ndaigona kuva zvakaipa uye kuti zvose mabhuku uchapisika kukubatsira nekuti Mwari chete anoziva vavengi vanokwanisa Faith.
Tinoona uye kuchengeta kuti kubvira 2008 chiKristu akabva mugehena.Hama dzedu nehanzvadzi dziri akauraya munyika yose mukuru hanya kwedu akasarudzwa vakuru. Tinoona kuti Islam Akarwa vaKristu.
The September 27, 2015 Pope Francis ave akatoramba Jesu Kristu ari Cathedral St. Patrick muna US, yakaenzana pamutemo kuzivisa rufu yeKatorike chakaitwa Pope Francis, uyo akanga atova aramba unhu marongero yemisangano kana vakagadzwa March 13, 2013.
Tinoona kuti vakawanda nguva inopfuura, patinonyanya « vaKristu » vari zvaitorwa akaisa dhoku.
mazuva erima mberi, saka ndakasarudza kunyora mabhuku maviri kuti zvichava kubatsira kugadzirira misangano akangwara kana chakavanzika nekurovererwa sezvo vaKristu vokutanga kana iwe unogona kundoparidza uye zvakare kusvikira kudzoka kwaIshe.
Zvisinei, achitarisira kuti ichi hachisi zvakakodzera uye kuti nguva ino zvakanaka uye kuti Jesu Kristu ndiye shure gore rino 2016 mumwedzi September kana October, ndinofunga pachiitiko nomutambo hwamanda pakati 03 uye 4 October.
Ini akatsanangura Blog vhiki rokupedzisira romuBhaibheri kuguma kwenguva, makore manomwe zvaprofitwa nomuprofita Dhanieri 600 makore okutanga asati kuuya kwaJesu Kristu.
Manomwe apfuura kuvhara kuguma kwenguva, ndiye chirango chaMwari.It inodonongodzwa muuprofita kuti iyi yemakore manomwe ine kaviri matatu nemakore nehafu uye kuti mumakore matatu nehafu wechipiri, kurwadziwa huchavara zvikuru.
Sezvo ndakazvizivisa ari munyaya yangu kudzoka JESU KRISTU Dai 14 OR 15 September 2015! Pamutambo hwamanda kudzoka kwaJesu Kristu aifanira kupindira pachapera makore manomwe kutambudzika, kutanga ini yaiva kune 29 September 2008 zvinotevera pamusika wemari kwokuputsika Wall Street nokuti simba kucherechedza kuti kubvira ipapo vanhu vose waizopiwa zviratidzo uye uprofita kudzoka kwaJesu Kristu vari kuitika pamwe dzakawanda simba uye zvikuru.
Kudzoka kwaShe wedu aifanira kupindira September kana October 2015. Asi isu tose vakawana kuti kwaiva kukanganisa. Asi marwadzo zvaitoitika uye richikura kubvira 29 September 2008.
Kukanganisa Ndinofunga chinoitwa kwete kuti uprofita yataurwa makore kaviri matatu nehafu kufungisisa.
Ndazoziva kana uprofita waiti makore kaviri matatu nehafu kuti ndiye akafa nguva pakati nguva mbiri makore matatu nehafu.
Wokutanga Nguva yacho yakaguma muna March 2012 nechiratidzo guru kudenga kuti zvinosuruvarisa hanya sezvo zvakanga disproportionate uye zvisingatarisirwi: Spanish mutauro vhidhiyo.
Chikamu nhatu chechipiri nehafu kunotanga zvandinofunga pamwe kugadzwa Pope Francis 13 March 2013 uye zviri pachena kuti marwadzo richaramba uye achiipa kuwedzera pazvinhu zvose nzvimbo.
Matatu nehafu pashure March 13, 2013 tinosvika September 13, 2016!
Saka, tinofanira kuda kubvuma. The kuongorora zvose zviratidzo uye uprofita muBhaibheri kuzivisa kudzoka kwaJesu Kristu anoratidza refu mazita zviitiko zvose zvamarudzi kuti tiri kurarama Panyika.
Njodzi, kudengenyeka kwenyika, moto, dzvotsvotsvo remvura, madutu, Dutu, Exodus, nhenda, nzara, mhirizhonga, hondo, nerunyerekupe rwehondo, ugandanga, kurasikirwa zvaunokoshesa, vasingaverengeki kufa hove, shiri nemhuka uye zvipfuwo pasina tsananguro Mazuva upenyu nyika uye vanhu. Zviitiko izvi vakanga akaporofita kuzivisa kudzoka Ishe naMambo, Jesu Kristu chete mwanakomana waMwari achipinda kutonga panyika kwemakore ane chiuru kuuya kusvikira anodudzira nezvekuguma kwenyika.
Hongu kufanira zvingaita sezvinoshamisa tiri zvichida kuda kusangana Musiki wedu.
Ndinoda kungwaririra uye vachiti pamwe uye bvuma kuti ndini sezvo asi zvichida kamwe mukutsauka.
Handizi muporofita aunotoziva uye saka handina kunyadziswa muna pakubvuma chakaipa. Zvisinei, kana Jesu Kristu akatisiyira zviratidzo zviri kuti isu kutarisa uye kumirira apo nokutipa simba uye tariro anodiwa kukurira zvinetso chokuita pakuguma kwenguva.
Ndicho akanaka kudzoka kwaShe wedu.
Asi iwe unogona kufungidzira kuti kana pane akanaka, panewo mashoko akaipa.
Mashoko okutanga zvakaipa ndechokuti mwedzi kuuya vari kuenda kwazvo yakaoma sezvo tikave pedyo chaizvo nezuva kudzoka kwaJesu Kristu uye kuti mazuva okupedzisira achava yakaomesesa. Vachava nguva zuva rokutsamwa kwaMwari.
Naizvozvo zvikuru mumwedzi kuuya kuti zvikuru nesimba mumunyengetero, achikumbira ruregerero uye kutendeuka. Mushure kungava manonoko !!!
Mashoko yechipiri dzakaipa kuti handizivi kana kubvutwa chechi vachava nguva yapera kana isati nguva zuva rokutsamwa kwaMwari.
Nyengetera hama dzangu dzinodiwa nehanzvadzi kuitira kuti kudzoka kwaShe wedu Jesu Kristu haasi kunobatsirawo kunonoka nokuti marwadzo zvichava zvikuru zvisingatsungiririki Vakawanda vedu.
Zvisinei tingava pasinei Kururama ongororo wangu kwakaita kuti kumirira mamwe makore mashoma kudzoka kwaShe wedu uye pachine I ruregerero.
Nzira yaIshe, uye ndakawana, kazhinji kwegore risingapindiki!
Kana tine kumirira Mumakumi emakore zvichange zvakaoma chaizvo uye ini vaswedere mufunge chokuti nhema vateveri muvengi raKristu vari yakakura kupfuura ivo kuoneka, uye ini kukokai kuona vhidhiyo iyi iri Blog peji ino: » PANO « kuwana pfungwa kwakakura nhema tikatsungirira kwemakore pamusoro nemakore pasi.
Beloved Hama neHanzvadzi muna Kristu Jesu ini zvinokukumbira kuti arayire mabhuku angu Edilivre shanduro mbiri.
Mwari akuropafadzei uye akuchengete vari kurudyi uye zvakanaka nzira yorudo, rugare, kururamisira, tsitsi uye kuzvininipisa kuti isu kurondwa Jesu Kristu uye zvinoisa naye kuna Mwari.
Nokuti kunzwisisa zvakamirira vanhu nani, ndinokukurudzirai kuverenga nyaya yangu kudzoka JESU KRISTU FOR SEPTEMBER OR October 2016
The mutambo hwamanda vechiJudha kuitwa musi 03 uye October 4, 2016 kunofanira tose shamisika mukutarisana Pasi …. !
Shanduro Edilivre – APARIS
In nokuvhara ino, ndakacherechedza paterevhizheni kuti chinokatyamadza yakanga ichiri yakarohwa mhuri dzakawanda kubhombiwa kuBelgium.
Ndinopupurira pano kusuruvara yangu yakadzika uye kukoka hama dzose dzangu dzinodiwa nehanzvadzi munaKristu kunyengeterera vacho uye nemhuri dzavo.
Musateerera kuvenga asi kuti mabasa aya uzvidzwe tive kunzwisisa kuti magandanga aite nokuuraya yavo muzita Mwari vanodana Allah!
Islam ndiye chitendero Lucifer uye kubva pakutanga kwayo nyika Islamists vanotaura Rudo zvombo muruoko!
Uye kuti Papa akaramba kuti zvitendero zvose ndeechokwadi uye vari zvakare nzira kuna Mwari!
Usakanganwa kwekanguva kuti Jesu Kristu akati :
« Ndini nzira nechokwadi uye noupenyu; hapana unouya kuna Baba, asi nekwandiri! «